Hissho Sushi Retail Partners - Hissho Sushi
Hissho သည်လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သောခေါင်းဆောင်နှင့်ဆူရှီလုပ်ငန်းကိုနောက်အဆင့်သို့တက်လှမ်းနေသောတီထွင်သူဖြစ်ရန်သန္နိis္ဌာန်ချထားသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လီလက်တွဲဖော်တွေအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ Hissho ဆူရှီသည်စျေး ၀ ယ်သူများထံမှစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်သာရနိုင်သည်ဟုထင်သောလတ်ဆတ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပရီမီယံလိပ်များနှင့်မီနူးပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာကိုသင်၏စတိုးဆိုင်အတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ငါတို့ဆူရှီတွေကိုသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုယူလာတယ်။
ဤအဆင်ပြေသောတည်ဆောက်မှုကကုန်ပစ္စည်းအတွက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းနေရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံစားဖိုမှူးများအတွက်တစ်နေ့တာလုံးလတ်ဆတ်သောဆူရှီများကိုခွင့်ပြုသည်။ Sushi roll များမှ nigiri နှင့် poke အထိသင်၏ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူကြိုက်အများဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများမှရွေးချယ်နိုင်သည် (သို့) စားဖိုမှူးအားစိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်သည်။
ဖမ်းပြီး -go Go Kiosk
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆူရှီဘီယာနှင့်ဝိုင်ဘားများသည်သင်၏စတိုးဆိုင်အတွင်း၌ဖောက်သည်များလာရောက်မည့်နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်။ ဤပုံစံတွင်လုပ်ထားသောအော်ဒါမှာယူသည့်ဆူရှီနှင့်ဒိုင်မ်မ်တို့ကိုဒေသဆိုင်ရာဘီယာများနှင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်သောဝိုင်များနှင့်လောင်းထားသည်။ Hissho ၏ဘီယာနှင့်ဝိုင်ဘားတို့သည်ကုန်စုံစာရင်းမှပစ္စည်းများကိုမစတင်မီအချိန်သည်ပျော်စရာကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အမြန်ရပ်နားသည်ဖြစ်စေသင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးဆူရှီကိုသိမ်းယူရန်အေးအေးဆေးဆေးနှင့်အဆင်ပြေသောနေရာကိုပေးသည်။
2019 ခုနှစ်တွင် Hissho Sushi သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအယူအဆသစ်ဖြစ်သော Hissho on the Go ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အထူးလေ့ကျင့်ထားသော Hissho Sushi စားဖိုမှူးများ Hissho ကို Go Sushi တွင်နေ့တိုင်း commissary site တစ်ခုတွင်ပြုလုပ်သည်။ ဈေးဝယ်သူများအနေဖြင့်စျေးဝယ်စဉ်အတွင်းအနှစ်သက်ဆုံးလိပ်များကိုအဆင်ပြေစွာသိမ်းယူနိုင်သည့် Walmart ကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်များထံသို့လိပ်စာစောင်များကိုချက်ချင်းပေးပို့လိမ့်မည်။
Hissho မှာဒီမှာငါတို့ပေးဖို့နည်းလမ်းအသစ်တွေအမြဲရှာနေတယ် ထိပ်တန်းအဆင်ပြေမှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဆူရှီ!
ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်အောက်ပါဖောင်ပုံစံကိုဖြည့်ပါ FREE ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရိုရှာ၏မိတ္တူ!
Hissho တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် franchisees များအတွက်ဆန်းသစ်သောရွေးချယ်စရာများကိုဖန်တီးရန်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေသည်။
Hissho တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွေ့အကြုံသစ်ကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းထားသည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အမြန်မေးခွန်းမေးစရာရှိပါသလား။ သင်သိရန်လိုအပ်သမျှသည်ဤတွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။